Malunga nathi -Izixhobo zeSayensi zeTianjin zoLuntu zeSayensi
Izixhobo zeTianjin Labor Scientific Co., Ltd. Ifumaneka eTianjin Innovation Industrial Park, kwiSebe laseBeijing leZiko lezeNzululwazi laseTshayina kwindawo yokubonisa ezimeleyo yesizwe. Ipaki yorhwebo yaseTianjin yaseBeijing yeSebe laseTshayina lezeNzululwazi yimpumelelo ebalulekileyo yeCAS ekuphenduleni ngokukuko kwisicwangciso sobuchule sesizwe sonke "sokuphuhliswa okulungelelanisiweyo kweBeijing, iTianjin kunye neHebei" ebekwa phambili yiKomiti ePhambili yeCPC, kwaye ikhuthaza ngenkuthalo imveliso impumelelo yeZiko lokudlulisela kwingingqi yeTianjin. Ukuthembela kwitalente, itekhnoloji kunye nokufezekisa izibonelelo zeBeijing yesebe laseTshayina leSayensi lezeNzululwazi, elizinikele kuphando kunye nophuhliso lwezixhobo zohlalutyo kunye nesoftware enje nge-Fourier eguqula i-infrared spectrometer, kufutshane ne-infrared spectrometer, i-infrared detector ye-oyile, i-double beam infrared spectrophotometer , I-ultraviolet ebonakalayo kufutshane ne-infrared spectrophotometer, i-ultraviolet spectrophotometer ebonakalayo, isalfri yokuhlaziya yasimahla eluthulini, njl, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo. Inika isisombululo esidibeneyo se-biomedicine, isayensi yezinto eziphathekayo, i-petrochemical, ukhuseleko lokutya, ukhuselo lokusingqongileyo kunye nezinye iinkalo.
ligxile kuyilo, i-R & D, kunye nezixhobo zesayensi zokuthengisa, kunye neqela lophando kunye nophuhliso lweeDyunivesithi zaseTshayina. Ujoliso lwethu kukubonelela ngeyona nkonzo inokhuphiswano kubathengi bethu.
Phambi kokuba sibandakanyeke kwingingqi ye-spectrometer, besibandakanyeka kuvavanyo lweelebhu ze-physics, kubandakanya ubuchwephesha, ubushushu, i-electromagnetism, i-optics, imithombo yokukhanya, i-spectrometer kunye ne-monochromators, itheyibhile yokwahlula ukungcangcazela, njl njl. Iimveliso zethu ziyilelwe ukusebenza ngesandla ukunceda abafundi baqonde imigaqo ngokulula ngokuhlekisayo, iphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kwemfundo.
Imithombo yethu yokukhanya ibandakanya isibane seMercury, isibane seSodium, isibane seBromine Tungsten kunye neelaser ezahlukeneyo.
Sikwanazo noluhlu lwee-mechanic zoomatshini zombini zeelebhu kunye namaziko ophando, anje ngee-mounts ezibonakalayo, iibhodi zezonka kunye namanqanaba okuguqulela.
Sizinikezela ekuboneleleni ngomgangatho ophezulu, iindleko ezifanelekileyo kwiimveliso kubathengi bethu kwihlabathi liphela.
Ngoku baninzi abathengisi abavela e-USA, Australia, Afrika, India, ASEAN, njl.
Inkonzo ye-OEM inikezelwe.